Shiinaha Sheyga birta ah ee saxda ah ee saxda ah ee birta birta ah ee goynta birta / soosaarayaasha adeegga goynta laser iyo alaab-qeybiyeyaasha. THYH
Magaca Badeecada Qalabka birta ah ee saxda ah ee saxda ah ee adeegga birta birta ah / adeegga goynta laser
Waxyaabaha birta / birta kaarboonka / birta galvanized / sheet aluminium
Midab sida ku cad naqshada macmiilka
Nidaamka caadiga ah Goynta Laser CNC> Laabista Birta> Alxanka iyo Nadiifinta> Daaweynta Dusha> Qaybaha Isugeeyay iyo baakadaha.
Codsiga gaari, alaabta guriga, mashiinka, korontada, iyo qeybaha kale ee birta
Xirxirida Xirmooyinka xirmooyinka badda ee caadiga ah ama waafaqsan macaamilka codsigiisa
Shuruudaha Ganacsiga EXW, FOB, CIF, C&F, iwm
Shuruudaha Bixinta TT, L / C, Western Union, mushahar bixin
Saddex Iswiisarislaan Asal ah oo Iswisarland ah oo la soo dhoofiyay ayaa ku takhasusay Goynta Birta Mashiinka Birta, Laabista iyo Alxanka
Noocyada wax soo saarka mugga.
● Qalabka: Kaarboonka Birta ah, Bir daxalka leh, Aluminium, Copper, Alloys iyo sida baahidaada gaarka ah ay tahay.
Co Dahaarka budada, Rinjiga, Zinc Plating, Sandblasting, Anodizing iyo sida baahiyahaaga qaaska ahi u jiraan.
Soo saaraha been-abuurka xirfadeed ee xirfadlaha ah, khibrad 20 sano ah, oo ku takhasusay goynta leysarka, goynta plasma, foorarsiga, alxamida, shaabadaynta iyo makiinadda. Bixinta alaab bir ah oo si gaar ah loo alifay, jir alxanka / qaybta / salka / boostada / kabadhka / qalabka / miisaska / lugaha dabka
mashiinada, bambooyin, dhismaha, badda, mootada, qalabka guryaha iyo warshado kala duwan.
J: Waxaan hogaamineynaa warshadda wax soo saarka ee qingdao, shiinaha, Marka waxaan soo qaadan karnaa qiimaha adiga kugu habboon.
2.Mudo intee leeg ayaan heli karaa qiimaha?
Qiimaha waxaa lagu soo qaadan doonaa 24 saacadood gudahood ka dib marka aan helno su'aalahaaga macluumaad faahfaahsan (oo ay ku jiraan sawirro, qalab, daaweynta dusha sare, tiro, baahiyo gaar ah, iwm)
3.Can ma soo saari kartaa badeecooyin qaas ah oo buuxiya shuruudaha macaamiisha?
Haa, Waxaan ku takhasusnay soo saarista alaabada OEM ee loo habeeyay iyadoo loo eegayo sawirada ama shay-baarka uu bixiyo macmiilku 15 sano.
4.Can ma bixin kartaa alaab dhameystiran?
Haa. Waxaan bixinaa alaab dhameystiran oo ay ku jiraan kabka, makiinada, dhameystirka daaweynta, xirxirida iyo rarka marka la codsado. Hadafkeenu waa inaan ku siino hal-joogsi iyo adeeg ku qanacsan.
5.Sidee baan ku heli karaa muunad si aan u hubiyo tayadaada?
Marka la eego kiiska oraahda waa la xaqiijiyay. Tusaaluhu wuxuu noqon doonaa mid bilaash ah oggolaanshaha macaamiisha, xamuulka xamuulka ah.
6.How warshaddaadu ka qabataa xakamaynta tayada?
Kooxda kormeerka khibrada leh ee tayada tuurista waxay fuliyaan dhamaan nidaamka xakamaynta tayada laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa alaabada dhammaatay Dhammaan kormeerayaasha si wanaagsan ayaa loo tababaray waxayna leeyihiin aqoon wax soo saar hodan ah iyo khibrado kormeer.
7.Hudo intee le'eg ayaan filan karaa in aan helo saamiga?
Waxay kuxirantahay, caadiyan 25 maalmood ~ 30 maalmood (oo ay kujirto waqti sameynta caaryada). Muunado waxaa soo diraya DHL, FedEx, UPS, TNT ama EMS, ect.
8.Maxaa ku saabsan waqtiga ugu horeeya ee wax soo saar ballaaran?
Waxay kuxirantahay tirada amarka. Caadi ahaan, 30 ~ 45 maalmood ka dib helitaanka deebaajiga.
9.Waa maxay MOQ?
Ma lihin xadka adag, tiro yar ayaa waliba shaqeyn kara.
10.Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
Waxaan aqbali karnaa T / T ama L / C habka lacag bixinta.
Hore: OEM / ODM Sheet Birta Daabacaadda / sheet sax sax sheet / Adeeg Jarida laser
Xiga: Qaybo ka sameysan warqad khaas ah oo ka sameysan warshad xirfadeed.
Jarida Laser Tube ahama
Goynta Laser Fudud